भगवान जस्तै श्रीमान बिनोदलाई सबैले अर्की बिहे गर मर्छे भन्थे,छोरी सम्झेर रोइन अनिता ! दिदी यसो भन्छिन ( भिडियो ) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भगवान जस्तै श्रीमान बिनोदलाई सबैले अर्की बिहे गर मर्छे भन्थे,छोरी सम्झेर रोइन अनिता ! दिदी यसो भन्छिन ( भिडियो )
7,9382minutes read
काठमाडौं, हेर्दा जति राम्रो देखिए पनि आजभोली निकै खोक्रो बन्दैछन्, वैवाहिक सम्बन्ध । निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घटना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् ।
२०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो । विनोद अहिले २७ वर्षका भ एभने अनिता २४ वर्षकी । उनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रोसंग चलिरहेको थियो । हाँसी खुसी थिए । विहेको २ वर्षपछि छोरी आहानाको आगमनले उनीहरूको खुसी झन् बढ्यो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
छोरी आहानाले डाक्टर देख्नसाथ “अंकल मामुलाई छिटो निको गराइदिनुस् न” भन्छिन् । अबोध बालिकाको त्यो अनुरोध सुन्दा जो कोही भाबुक हुन्छन् । आहाना ३ वर्षकी भइन् । उनलाई विनोदको दिदीले हेरचाह गरेकी छन् ।
विनोदको एउटै चाहाना छ, श्रीमतीलाई निको भएको देख्ने । अनिताले निको भएपछि काठमाडौमै बस्ने इच्छा राखेकी छन् । त्यसैले अब काठमाडौमै बस्ने निर्णय गरेका छन् विनोदले पनि
“देवीको रुपमा घरमा भित्रिएकी थिइन् । मेरो बुबाआमाले पनि औधी माया गर्नुहुन्छ । अनिताको व्यवहार पनि निकै मायालु छ” विनोद भन्छन्, “श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई इज्जत र माया दुवै दिनुपर्छ । श्रीमान्ले माया गरे सबैले माया गर्छन् ।” अनिताको प्रवेशले घर परिवारमा माया, ममता, सुख सबै भित्रिएको बताउने विनादे उनी बिरामी भएपछि परिवार तितरबितर भयो भन्छन् । बुबाआमा गाउँमा, छोरी फुपूहरूसंग । आफू अनिताको स्यारसुसारमा ।
अनिताका बुबाआमा पनि ज्वाइँसंग निकै खुशी छन् । छोरीले भगवानजस्तो जस्तो श्रीमान् पाएको भन्दै छोरीको लागि आफूहरूलाई कुनै चिन्ता छैन भन्छन् । विनोदको मायाले नै छोरीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको भन्दै उनीहरू भन्छन्।